Maxaa Mowduucyada Kitaabka Ma Kala hadal? — TRIP LEE
JTDean • January 27, 2015 at 11:39 waxaan ahay • Reply
Waa Sidaas Crazy aniga Just Shaqeeya la Company New yeero Kac, Taasi ma Sidaas si fiican ha ,Laakiin waxaan u noqdeen Up Si akhrin Kitaabka New Tani in awood doonaa The Youth iyo Generation ayaa ka weyn Taasi Waa Super Cool Si U Christian ogow a, Waxaad tegi karin NBA,NFL, MLB. Cciyaar kubda cagta, Run Track, keena kuwan raadkaygay, Noqo Actor a, ama Actress a. Sky ayaa inoo xad ah, halkaas oo Ruuxa Rabbiga deggan ee, waxaa jira Liberty iyo xorriyadda xagga injiilka Ciise Masiix. Kuna shukriya Waayo, waxaad Waxaan ahay Lecrea ,Tedesi,iyo Qof From The 116 Riix ,Waxaan Ilaah wuxuu ka Nasahanyahay ,Waxaan Ilaah ammaan ah oo aan la sugi karaa si kor loogu qaado Tani Kac New Book !!!!!!!Isagu waa istaahilaa ,Isagu waa istaahila in la ammaano!!!
David • March 29, 2015 at 5:06 pm • Reply
Maxaa buug laga cabsado! Trip Lee ayaa qoray buug waa akhriyo ee dhammaan da'yarta. Waxaan ma uu gelin kara. 5 ka mid ah 5 xiddigaha.
David • March 29, 2015 at 5:18 pm • Reply
Trip, Oo weliba waxaan la tukanayay oo ku saabsan arrimaha hurdada aad.;) Rajaynaynaa in aad dareento in aad fiican:D
Yves • Laga yaabaa 30, 2015 at 2:14 waxaan ahay • Reply
Trip, Weligay ahaa galay akhriska. Laakiin Ilaah macno ii soo hurdadii ka oo i qanciyay in ay soo iibsadaan buugga “Kaca”. Man, Waxaan ma u dhammeeyey, laakiin waxa aan aaminsanahay in aan ku dhawaad ​​qabashada 99.9% dhibaatada aad ka hadleynaa in Kac. Markii uu la tallaabada ugu horraysa ee aan caafimaad iyo isbedel. Waa nin buug weyn, oo ii iyagoo jacayl la dhaqanka hip hop, Rabbiga waan ammaani for ila hadlay iyada oo a Heesaaga / Pastor. Waxaan gebi ahaan la xidhiidhi karaa in ay…
iyo mid ka mid ah wax ka badan, Waxaan jeclahay inaad si fiican u sida karraani dhaqsiyo badan heesaa ah, laakiin hayn shaqo weyn sameeyaan sheekada weyn oo Ilaah :)
Bolt • June 4, 2015 at 1:09 pm • Reply
Trip marnay fiican tha! Majeero shaqadaada in ka badan halkan Nigeria. Waxaad Bro barako, mahad. #rhemaprocess @iamslizybolt #116
PK • June 26, 2015 at 3:25 pm • Reply
Trip, Waxaan soo iibsaday aad buug dhowr bilood ka hor oo run ahaantii waan jeclahay sida dhabta ah waxaad tahay. Aan jeclaa aad hamiday u adeegaan Rabbiga ah waxaa ii qaadeysaa in ay sii wadaan in ay ku noolaadaan jidka Ilaah noo doonayo in ay ku noolaadaan. Anigu waxba ma aan samayn arrin la sabab buugga waxaan kinda leeyihiin in 7 SFIga oo macquulka socda xilligan lol! Laakiin waxaan si dhab ah u waxyoonay by buugga. Mahadsanid, walaalkiis! Ilaah ha idiin barakeeyo!
Alan • July 17, 2015 at 11:24 waxaan ahay • Reply
Barako Brother in Masiix
chara • August 7, 2015 at 9:33 waxaan ahay • Reply
Anigu waxaan ahay ayuu u faraxsan in ay kitaabkan!! Waan ku amartay online iyo waxaan la sugaya in ay yimaadaan. Anigu ma hubo in uu ahaa sidaas oo kale ayaan keentay in ay tani ka mid ah, gaar ahaan anigoo eegaya waxaan leeyahay buugaag kale oo badan oo aan shelf buug wixii aan akhriyin oo aadan runtii aan lahayn qorshe ay ugu dhakhsaha badan u akhri waqti kasta :-) Laakiin waxaan la sugi on Kac oo waxaa ugu dambeyntii yimid shalay. Markii aan guriga ka helay waxaa ku jiray xirmo albaabka oo waxaan filayaa inuu noqdo kitaabka. Soo baxday buugga la geeyey USPS oo ay ahayd in aan boostada. Xirmada albaabka ahaa labo ka mid ah kabaha waxaan amar ku. Tani waa si la taaban karo, maxaa yeelay, HORTA waxaan leeyahay wax for kabaha iyo gebi ahaan waxaan halmaamay waxaan iyaga ku amray. Ninkaygii xitaa laga sheegay I ma u baahan tahay in la keeno labada ciyaaryahan kale oo kabaha guriga haddii Waxaan uga takhalusi labo ka mid ah. Taasi waa fikirka cilladaysan ii :-) Waxaa laga yaabaa in isagu waa ka qaadaan la macquulka maxaa yeelay, isagu wax ku saabsan kabaha ma odhan xalay!! Anyway, ka dib markii kids u soo baxeen inay sariirta Waxaan bilaabay Kac iyo cutubka reading 2 Waan ogaa sababta aan sidaas lagu sawiray kitaabka. Sababaha aad u fara badan si ay u qor qaybta comment, laakiin anigu waxaan ahay on cutubka 4 hadda iyo waxa uu horey u Muga ila hadlay oo igu. Badidoodu, sababtoo ah sida ay ugu qoran tahay iyo sida taasi ugu xirto iyo waxyaabo kale. Anyway, Waxaan ku faraxsanahay oo aan mar hore la barakeeyey. Waxaan u tegayaa inaan durba reading laakiin waxaan qaatay fasax loo qoro comment this.
faasas • December 15, 2015 at 1:39 waxaan ahay • Reply
PST. jillaafo u've ahayd blessin dhab ah ii. nd i runtii barakeeyo, waayo, Ilaah makin ii kulan u. halkan in Nigeria our kaniisadaha deegaanka weli raabka c sida ay kireeyaan isagoo vry Christian
RobinRicheson • March 25, 2016 at 12:15 waxaan ahay • Reply
Waxaan la micno ah si ay u iibsadaan aad buug iyo akhriyo waxa laakiin nolosha helo si duulaan waqtiyo. Laakiinse iyada oo duulaan ku, nolosha maalin kasta ee aan aniga iyo qoyska, Masiixa had iyo jeer soo hormara.
Halkan magaalada Ilaaheenna ah Owensboro, Ky. iyada oo aan kaniisadda waxaa jira barnaamijka la yiraahdo Friends of Dambiilayaale;. Friends of Dambiilayaale; waa barnaamij Masiix xuddun u deggan yahay kabashada walax diiradda ku saabsan dib u soo celinta iyo dib u heshiisiinta oo rag iyo dumar si ay Masiix xagga Xaqiiqooyinka kitaabiga ah, xisaabtanka, iyo xirfadaha nolosha. . .waxaan ku dadaalnaa in aan caawiyo walaalaha aan Masiixa dhaaf, in wax laga barto khaladaadkii ay, in Ilaah wuxuu og yahay iyo in la dhiso xidhiidh shakhsi ahaaneed oo isaga la. Dadka deegaanka ayaa, shaqaalaha, iyo mutadawiciin yihiin dhammaan dadka la yaab leh!
My iyo ninkeeda aan sameeyey khalad ee la soo dhaafay; ma Ilaah garanaya ahaa mid ka mid ah. Maanta (3/24) waxaan u dabaal 15 sano ammaanta guurka iyo waxaan haysan lahaa dibadda ah Ilaah ku ammaanaya oo og jacaylkiisa iyo nimcadiisa. Tani waa wax aan caruurteena maalin kasta xusuusin!
Waxaa noo farxad lahaa in aad qabto in Owensboro on August 20 in la sameeyo muuqaalka ah ee our Friends sanadlaha ah ee lacag ururintu Dambiilayaale;!
Kianna • Laga yaabaa 20, 2016 at 4:14 pm • Reply
Waxaan leeyahay wax aan nuqul. Waxaan rajeynayaa inuu kitaabka kala dhameysan by dhamaadka Isbuucaan. Waxaan ku riyaaqay waxa aan ilaa iyo haatan ka akhriso,
KIANNA • June 26, 2016 at 1:33 pm • Reply
CG • October 30, 2017 at 10:41 waxaan ahay • Reply